Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » Philippe Coutinho oo si cad uga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Liverpool, miyuu niyadda la dilay kooxda Barcelona?Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
Philippe Coutinho oo si cad uga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Liverpool, miyuu niyadda la dilay kooxda Barcelona?
Kubadsameeyaha kooxda Liverpool Philippe Coutinho ayaa wuxuu caddeeyey inuu ku faraxsan yahay sii joogista kooxda ka dhisan Anfield Road.
Dhowaanahaan waxaa la isla dhexmarayey warar xan ah oo sheegaya inay kooxda Barcelona dib usoo cusbooneysiin doonto xiisaheedii ay u qabtay saxiixa Philippe Coutinho suuqa kala iibsiga jiilaalka ee bisha Jannaayo 2018ka.
La Blaugrana ayaa bishii August ee sannadkaan ku dhawaatay inay gacanta kusoo dhigto 25 sanno jirkaan, ka hor inta aysan Liverpool ugu dambeyn diidin inay iibiso Philippe Coutinho.
Ka hor kulanka xulalka England iyo Brazil ku dhexmari doona Wembley Stadium, Coutinho wuxuu caddeeyey inuuu si weyn ugu faraxsan yahay u ciyaarista Reds, xulkiisa Selecao ayuuna Axadii tababar kula sameeyey garoonka Fulham ee Craven Cottage.
Coutinho ayaa wareysi uu bixiyey ku yiri: “Waxaan ka ciyaarayaa mid ka mid ah horyaallada ugu waa weyn adduunka.
“Marwalba waan ku faraxsanahay ka ciyaarista England Premier League, balse waqtigaan waxaa muhiim ah inaan diiradda u saaro u ciyaarista xulkeyga qaranka. Waqti xaadirkaan waan ku faraxsanahay nolosheyda”.
Kooxda tababare Ernesto Valverde ee Barcelona ayaa bilowga sannadka soo aadan dib u heli doonta Ousmane Dembele sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay ka quusato saxiixa Coutinho.